शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिंदै विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिंदै विश्वप्रकाश शर्मा Canada Nepal
शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिंदै विश्वप्रकाश शर्मा
मोनीका सिंह आश्विन ४ २०७८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १४ औं महाधिवेशनमा आफूलाई महामन्त्री पदको लागी उम्मेदवारी दिंदै आफ्नो २४ बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा क्याम्पमा रहेर प्रवक्ता बनेका विश्वप्रकाश शर्मा भने यो महाधिवेशनमा देउवा भन्दा अर्को क्याम्पमा जान सक्ने सम्भावना बढेको चर्चा चलेको छ । विश्वप्रकाश शर्माले आफू अहिले कुन क्याम्पमा रहेको बारे खोलेका छैनन् तर भित्रभित्रै विमलेन्द्र निधी क्याम्पबाट लड्ने तयारी रहेको बुझिएको छ ।
विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको २४ बुँदे अवधारणा पत्र हेर्दा प्रवक्ता शर्माले शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । सभापति देउवालाई अब सम्मानजनक बिदा लिनुपर्ने भाव प्रवक्ता शर्माको अवधारणा पत्रले जनाउँछ । शेरबहादुर देउवा दोश्रो पटक सभापति बन्ने दौडमा रहेका छन् भने विश्वप्रकाश शर्माको अवधारणा पत्रले शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद पदबाट सम्मानजनक बिदा लिनुपर्ने भाव व्यक्त गरेका छन् ।
सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकालमा मनमानी गरेकाले ढाकछोप गर्दा आफू विवादमा परेको कुरा महशुस गरेकाले विश्वप्रकाश शर्माले यस पटक देउवालाई साथ नदिने निर्णय गरेको उनी निकट नेताहरु बताउछन । शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र पनि राम्रो छाप छोड्न नसकेको साथै बलियो प्रतिपक्ष सम्म बन्न नसकेको प्रवक्ता शर्माले महशुस गरेका छन् जसका कारण अहिले देउवा क्याम्प छोड्दा आफ्नो राजनीतिक यात्रा सहज हुने बुझेका छन् ।
विश्वप्रकाश शर्माले ल्याएको प्रस्तावले अहिले देउवा निकटस्थहरु निराश भएका छन् । महाधिवेसनमा नेता शर्मा महामन्त्री बने र उनको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए देउवासहित धेरै सिनियर नेताहरुको राजनीतिक यात्रामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । नेता शर्माको प्रस्ताव अनुसार लगातार ६ पटक सांसद बनेका देउवा अबको संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यसो हुँदा देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुने देखिन्छ जसका कारण देउवा निकटहरु अहिले विश्वप्रकाश शर्मासंग रुष्ट भएका छन् ।
विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावले शेरबहादुर देउवा मात्र नभएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, बालकृष्ण खाँण समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । नेता शर्माको प्रस्ताव अनुसार ४ पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने भनिएको छ । रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, बालकृष्ण खाँण चारपटक सांसद भइसकेका छन् ।
विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव अनुसार जो जति योग्य भए पनि १ पटक राष्ट्रपति, २ पटक प्रधानमन्त्री, ३ पटक मन्त्री र ४ पटकभन्दा बढी सांसद हुन पाउने छैनन् । आफ्नो कार्यकाल भित्र जे–जे काम गर्नुछ गरेर सम्मानजनक बिदा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार यो प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभएर समग्र आफ्नो पुस्ताका लागि प्रस्ताव राखेको जनाएका छन् । आफ्नो प्रस्तावले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने भएकाले उक्त मोडल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
आश्विन ४, २०७८ सोमवार १२:०४:०९ बजे : प्रकाशित
शंकाको घेरामा राखेर कहाँ पुगेकी थिईन रामकुमारी झाँक्री ?
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको एक दरिलो खम्बा हुन् सांसद रामकुमारी झाँक्री तर त्यही खम्बा पार्टी कार्यालयको उद्दघाटनको दिन नपुग्दा धेरैलाई शंकाको घेरामा राखेकी छिन् ।
शुक्रबार दिउँसो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो नयाँ कार्यालय मीनभवनमा खोलिएको छ । कार्यालयको उद्दघाटन गर्दै माधव नेपाल सहित पार्टीका शिर्ष नेताहरु पुगेका थिए । माधव नेपाललाई संगै राखेर नेताहरुले कार्यालयको बार्दलीबाट अभिवादन गर्दै कार्यालयको शुभारम्भ गरेका थिए । उक्त कार्यालयमा सबैले खोजे माधव नेपालको दरिलो खम्बा रामकुमारी झाँक्री ।
मिडियामा समेत सांसद रामकुमारी झाँक्रीको खोजी भएपछी माधव नेपाललाई धेरैले फोन गरेर समेत सोधेको श्रोतले जनाएको छ । रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपाललाई छोडिन् वा मन मुटाव भएको कुराहरु चल्न थालेपछि माधव नेपाललाई हिजो दिउँसो फोन का फोन आउन थालेको उनी निकट श्रोतले बताएको छ । माधव नेपालले रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी कुनै हालतमा नछोड्ने तर किन आउनु भएन भनेर वहाँलाई नै सोध्नुस न भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
नयाँ पार्टी खोलेपछि नेकपा एमालेमै फर्काउन एमालेका नेताहरु लागीपरेको बेला सांसद रामकुमारी झाँक्री कार्यालय खोल्दा नपुग्नुले शंकाको घेरामा राख्न सफल भयो । तर रामकुमारी झाँक्री किन गइनन भन्ने जिज्ञासा बढेपछि उनलाई फोन गर्दा भनिन्, "म पार्टी कै पूर्व निर्धारित कार्यक्रमले गर्दा काठमाडौं बाहिर आएको छु ।"
रामकुमारी झाँक्रीलाई गठबन्धनको सरकारको केही कार्यहरु चित्त नबुझेको कुरा माधव नेपाल समक्ष उठाएकी थिइन् तर माधव नेपालले अहिले आफूलाई सहयोग गरेको सरकार विरुद्ध बोल्ने बेला नरहेको भन्दै नेता झाँक्रीलाई सम्झाउने गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले जनाएका छन् । तर यस्तो विवाद भने पार्टी भित्र सामान्य रहेको र यस्तो कारणले रामकुमारी झाँक्री जस्तो भविश्य बोकेको नेताले माधव नेपाललाई साथ नछोड्ने समेत उनले दाबी गरेका छन् ।
रामकुमारी झाँक्रीले कार्यक्रम स्थगित गरेर कार्यालय उद्दघाटनमा आएको भए सकारत्मक संदेश जान्थ्यो नि भन्दा ति नेताले भने, "त्यो चाँही राम्रो हुन्थ्यो होला किनकी अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीलाई बोकेर खरोसंग बोल्ने भनेको रामकुमारी झाँक्री नै हो । उनले हिजो कार्यालय पुगेर बोलेको भए अझै बल पुग्थ्यो होला तर सायद छोड्ने नमिल्ने कार्यक्रम भएकोले पनि होला । तर माधव नेपालसंगको मनमुटावले भने होईन ।"
रामकुमारी झाँक्रीले समेत आफ्नो मन मुटाव भए पार्टी कै प्रचारको लागि कार्यक्रममा काठमाडौं बाहिर आएको कुरा उल्लेख समेत गरेकी छिन् । कार्यालयको सुरुवातको दिन आउनुपर्थ्यो होला तर समय नमिलेकोले आउन नसकेको कुरा जनाएकी छिन् ।
आश्विन २, २०७८ शनिवार १९:२३:०५ बजे : प्रकाशित
बामदेव गौतमलाई किन कसैले पत्याएनन् ?
काठमाडौं । बामदेव गौतमले नेकपा एमाले परित्याग गरेको दुई हप्ताबढी पुगिसक्यो तर उनी अझै घरमा फुर्सदमा बसिरहेका छन् । एमाले परित्याग गरेका बामदेव गौतम नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्ने तयारी थियो तर अझै उनको यात्रा अन्योलमा परेको छ ।
बामदेव गौतम एमाले पार्टीमा फुट र गुटको राजनीति गर्ने नेताको रुपमा चिनिने गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीबीच शीत युद्ध सुरु गर्ने पात्र बामदेव गौतमलाई मानिने गरिएको छ । बामदेव गौतमले संसदीय चुनावमा पराजित भएसंगे प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोज्दै फुट र गुटको राजनीति सुरु गरेका थिए ।
प्रचण्ड र केपी ओलीबीच शित युद्ध छेडेर मिलाउने भूमिकामा आफु अगाडी सर्ने र कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले सांसद हुने बार्गेनिंग गरेको कुरा बारम्बार आउने गरेको थियो । नेकपा फुटको अवस्थामा हुँदा समेत बामदेव गौतम पर्ख र हेर भन्दै घरमै बसे । जसको हात भारि हुन्छ उतै तर्फ जाने सोच बनाएर घर मै बसेका बामदेवले न ओलीलाई खुलेर गाली गरे न प्रचण्डलाई ।
अहिले एमाले फ़ुट्को अवस्थामा पुग्दा बामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग बार्गेनिंग गरेका थिए । अध्यक्ष पद वा आउने महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको लागि अघि सार्ने भए पार्टी फुटाउनबाट जोगाउने सम्म प्रस्ताव राखेका थिए तर केपी ओलीले माधव नेपाललाई फकाउन कुनै चाँसो देखाएनन् ।
केपी ओलीले चाँसो नदेखाएपछि बामदेव गौतमले माधव नेपाललाई खुलेरै नयाँ दल दर्ता गर्नु म पनि आउंछु भनेर घोषणा गरिदिए । माधव कुमार नेपाललाई पार्टी दर्ता गर्न सहयोग गरेका बामदेव गौतमको मुख्य शर्त भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नुपर्ने थियो तर माधव नेपालले अस्विकार गरिदिए ।
बामदेव गौतमले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्न नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष पद समेत त्यागिदिएका छन् । तर अझै सम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्ने कुनै तयारी देखिन्न । माधव नेपालसंग दोश्रो अध्यक्ष र मन्त्रालयको माग गरेका बामदेव अहिले आफ्नै मागका कारण पार्टी प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
माधव नेपालले अहिले दोश्रो अध्यक्ष दिन नसक्ने निर्णय सुनाइसके भने मन्त्रालय एउटा सम्म दिनसक्ने कुरा समेत जानकारी दिएका छन् । तर बामदेव गौतम एमालेमा उपाध्यक्ष पद त्यागेर आएपछि दोश्रो अध्यक्ष पाउनुपर्ने जोड दिएका छन् ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले बामदेव गौतमलाई फकाउन न कुनै कोशिस नै गरे न त सम्झौता नै गर्न चाहे । एमाले त्यागेका बामदेव गौतमलाई पार्टी प्रवेश गराउन माधव नेपालले समेत न कुनै चाँसो देखाए न कुनै चाहना ।
आखिर किन बामदेव गौतमलाई किन कसैले पत्याएनन् ? नेकपा एमालेका एक नेताले यो प्रश्नमा भने, "बामदेव गौतमले संधै गुट माथी राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष बन्न खोज्नुभयो । वहाँको नियत पार्टी भन्दा आफ्नो पद बन्यो जुन माधव नेपाल र केपी ओलीले बुझ्नुभएको छ । बामदेव गौतमले अब बार्गेनिंग भन्दा पनि कम्प्रमाईज गर्नुपर्ने हुन्छ ।"
आश्विन ५, २०७८ मंगलवार १३:३७:०९ बजे : प्रकाशित
सुदूरपश्चिममा युवाहरु माझ दुर्गा प्रसाईको बढ्दो क्रेज, बाईक र्‍याली सहित गरे भव्य स्वागत
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेर युवाहरुसंग अन्तरक्रिया गरेका छन् । धनगढीका युवाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रसाईलाई बाईक र्‍याली सहित भव्य स्वागत गरिएको छ ।
मंगलबार धनगढीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बीएण्डसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका रहेका प्रसाईंले युवाहरुले साथ दिए सुदूरपश्चिममा पनि क्यान्सर अस्पताल खोल्न सक्ने कुरा बताएका छन् । युवा पुस्ताहरुले आफूमाथि विश्वास गरेर निम्तो दिएको कारण आफू आएको र साथ सहयोग पाए सुदुरपूर्वमा झैं सुदुरपश्चिमलाई पनि मेडिकल हबको रुपमा बनाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
झापामा सञ्चालनमा रहेको बीएण्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका कारण अहिले सुदुरपूर्वमा मेडिकल चहलपहल बढेको र अब काठमाडौं र सुदूरपश्चिममा पनि अध्ययन गरेर अस्पताल र कलेज खोल्न सकिने कुरा दुर्गा प्रसाईले कार्यक्रममा बताएका छन् । युवाहरुले दुर्गा प्रसाईमाथि भरोसा भएकाले आफूहरुले सक्दो साथ दिने कुरा कार्यक्रममा राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिम पहिलोपल्ट पुगेका दुर्गा प्रसाईले यो ठाउँमा अस्पताल खोल्न सके राम्रो हुने कुरा बताएका छन् । युवाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईले भने, "म यो गर्छु त्यो गर्छु त भन्दिन किनकी म नेता होईन र नेता जस्तो बोल्न नि सक्दिन । सक्ने कुरा मात्र बोल्छु र सुदूरपश्चिममा एउटा क्यान्सर अस्पताल खोल्न सकिन्छ यदी तपाईहरुले चाहनु भयो र मलाई साथ दिनुभयो भने ।"
युवाहरुले दुर्गा प्रसाईमाथी आशा रहेकोले सुदूरपश्चिममा निम्तो गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेको बताएका थिए । किन दुर्गा प्रसाई भन्दा आयोजक कमिटीले भने, "नेताहरुले बोल्ने मात्र गरे तर केही गरेनन् तर दुर्गा प्रसाईले बोले जस्तो आफ्नो छेत्रमा गर्नु भएको छ । त्यसैले वहाँले यहाँ आएर युवाहरुलाई हौसला दिनुभयो भने हामी साथ दिन्छौ । वहाँको जस्तो जोश र हौसला हाम्रो नेताहरुमा नभएकाले अब सुदूरपश्चिममा अस्पताल खोल्न दुर्गा प्रसाई नै चाहिएको लाग्यो र हामीले वहाँलाई निम्तो गर्यौं । वहाँ जस्तो व्यस्त व्यक्तिले हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आइदिनु भयो ।"
युवाहरुले दुर्गा प्रसाईलाई एयरपोर्टमा फुलको माला लाएर स्वागत गरेका थिए । एयरपोर्टबाट कार्यक्रम स्थलसम्म बाईक र्‍याली गर्दै युवाहरुले स्वागत गरेका थिए ।
आश्विन ६, २०७८ बुधवार १९:४७:०३ बजे : प्रकाशित
माधव नेपालको दुखेसो : पार्टी त खोलियो तर सांसद जोगाउन बढो गाह्रो
काठमाडौं । माधव कुमार नेपालले सरकारमा जान नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरे तर दर्ता गरेको पहिलो महिना नै उनलाई हरेक दिन सकस परेको छ ।
सरकारमा जान भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए जसका कारण माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन र नयाँ दल दर्ता गर्न सहज बन्यो । आफू बदनाम भएर भएपनि माधव नेपाललाई सहयोग गरेका देउवालाई अहिले माधव नेपालले नै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न दिइरहेका छैनन् ।
माधव नेपाललाई दल दर्ता गरे जत्तिको सहज पार्टी चलाउन भएको छैन । माधव नेपाल निकट श्रोतका अनुसार माधव नेपालले अहिले पार्टी खोल्नु त भयो तर पार्टीका सांसद जोगाउन यत्ति सकस परेको छ कि राम्रोसंग निदाउन नसकेको कुरा आफू नजिकका नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन् । सांसदहरु आफू संग पद कै लागि आएको र अहिले दबाब मात्र दिन थालेकोले गर्दा सांसद जोगाउन हम्मे हम्मे परेको आफू निकट नेताहरुलाई बताउन थालेका छन् ।
केपी ओलीमाथि भीम रावल आक्रामक हुने संकेत !
"नेकपा एमाले परित्याग गर्दा मन्त्री पद पाउने शर्त धेरैले राखेका थिए । माधव कमरेडलाई पनि नयाँ दलमा धेरै भन्दा धेरै सांसद चाहेको थियो त्यसैले सबैलाई मन राख्न मिलेसम्म सबैलाई आलोपालो गरि मन्त्रालयको जिम्मा दिउँला भन्नुभयो । अब अहिले आएर त्यो कुराले माधव कमरेडलाई पासो जस्तो बनेको छ ।" माधव नेपाल निकट एक नेताले जनाएका छन् ।
माधव नेपालसंग वामदेव गौतम समेत रुष्ट भएका छन् । एमाले छोडेर आउनुस तपाईलाई राम्रो ठाउँ दिन्छु भनेका माधव नेपालले अहिले आएर आफूलाई बेवास्ता गरेको तितोपन नेता गौतमले पोख्न थालेका छन् । माधव नेपालले दुई अध्यक्षको प्रावधान नराख्ने भन्दै वामदेव गौतमलाई जिल्ल पारिदिएका छन् । अहिले मन्त्रालय दिन पनि वामदेव गौतम र माधव नेपाल बीच कुरा नमिल्दा वामदेव गौतमलाई आफू संग राख्न सकेका छैनन् ।
माधव नेपालले मन्त्री बनाउने लिष्टमा आफूलाई नराख्ने बुझेपछि सांसद मेटमणी चौधरी समेत रुष्ट बनेको हल्ला चलेको पार्टी भित्र चल्न थालेको छ । मेटमणी चौधरीले केपी ओलीलाई सकेसम्म गाली गर्दै माधव नेपाललाई बचाउ गर्दै बोलेका थिए तर अहिले मेटमणीको नाम पहिलो लिष्टमा नपरेको देखेपछि मेटमणी चौधरी पनि रुष्ट बनेको पाईएको छ ।
माधव नेपालले प्राय भाषणहरुमा आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले भन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने घोषणा गरेका छन् तर निर्वाचन सम्म सांसदहरुलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने अफ्ठ्यारोमा पुगेका छन् नेता नेपाल । निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसंग गठबन्धन गरेर जाने योजना बनाएका माधव नेपाललाई आफू संग राम्रो सांसदहरु नभए माओवादी केन्द्रले नपत्याउने डर रहेकाले अहिले माधव नेपाललाई सांसद जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।
आश्विन १०, २०७८ आइतवार १५:५०:०५ बजे : प्रकाशित
दुर्गा प्रसाईंको पश्चिम दौडाहा, ५०० करोडमा क्यान्सर अस्पतालदेखि मेडिकल कलेज खोल्ने
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुदूरपूर्वमा बीएण्डसी अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र मेडिकल कलेज स्थापना गरेर पूर्वलाई मेडिकल हब बनाएका छन् । अब दुर्गा प्रसाईंको नजर पश्चिम छेत्रमा परेको छ जसका कारण अहिले उनी पश्चिम दौडाहामा लागेका छन् ।
केहि दिन अघि धनगढी पुगेर युवापुस्तासंग अन्तरक्रिया गरेर फर्किएका दुर्गा प्रसाईं फेरी नेपालगंज र सुर्खेत पुगेर त्यहाँका युवापुस्तादेखि स्थानीयसंग अन्तरक्रिया गरेका छन् । पश्चिमका युवाहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेर दुर्गा प्रसाईंलाई बोलाएको मौका छोपेर आफ्नो अस्पताल खोल्ने योजना बारे खुलेर बताएका छन् । सम्भवत नेपालगंज आसपास खोल्न सकिने सभावना बताउंदै प्रसाईंले पश्चिमका स्थानीयले साथ सहयोग गरे २०० करोड माथिको लगानीमा अस्पतालदेखि कलेज खोल्ने योजना बताएका छन् ।
नेपालगंज र सुर्खेत पुगेका दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई स्थानीय राजनीतिक दलदेखि युवापुस्ताले सहयोग गरेमा आफ्नो योजना अनुरुप पश्चिमलाई पनि मेडिकल हब बनाउन सक्ने कुरा बताएका छन् । मेडिकल हब बनाउन सकेमा नेपालबाट भारतसम्म उपचार गर्न जान रोक्न सकिने साथै विधार्थीहरु मेडीकल शिक्षा लिन विदेश जाने भिंड पनि रोक्न सकिने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
पश्चिम पुगेर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दुर्गा प्रसाईंले भने, "मैले सुदूरपूर्वमा अस्पताल र कलेज खोलेर मेडिकल हब बनाएको छु । अब मलाई पश्चिममा पनि अस्पताल र कलेज खोलेर मेडिकल हब बनाउने योजना छ । तर म एक्लैले गर्न सक्दिन त्यसको लागि स्थानीय युवाहरु, यहाँका राजनीतक दलदेखि जनताले साथ दिए म लगानी गर्न तयार छु ।"
पश्चिममा किन अस्पताल खोल्ने भनेर प्रश्न गर्दा व्यवसायी प्रसाईंले युवापुस्तालाई भने, "यो ठाउँमा धेरै बिरामीहरु छिमेकी देश भारतसम्म उपचार गर्न जाने पाएको छु । त्यो महँगो पनि पर्छ त्यसैले आफ्नै ठाउँमा अस्पताल खोल्दा बिरामीहरु छिमेकी देश जानुपर्दैन र सस्तो मै नेपालमा उपचार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै छिमेकी देश भारतबाट समेत बिरामी आउन सक्ने वातावरण देख्छु त्यसैले यो ठाउँमा राम्रो सम्भावना देखेको छु ।"
यो ठाउँबाट युवापुस्ता डाक्टर पढ्न विदेश जाने गरेको देखेको छु त्यो रोक्न समेत यो ठाउँमा अस्पताल र कलेज चाहिन्छ । सरकारले पनि नीजि क्षेत्रबाट लगानी गर्नेहरुलाई समेत स्वीकृति दिनुपर्छ नत्र हजारौं हजार युवायुवतीहरु हरेक वर्ष मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश गईरहेका छन् । मलाई देशको ठाउँ ठाउँमा अस्पताल र कलेजमा लगानी गरेर उपचारदेखि मेडिकल शिक्षा नेपाल मै सम्भव बनाउने योजना छ । प्रसाईंले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भने ।
दुर्गा प्रसाईंमाथी पश्चिमका युवापुस्ताहरुको ठूलो आश र भरोसा समेत देखिएको थियो । मन्त्री र सांसदले आफ्नो स्वार्थकोलागि बोल्ने मात्र गरेको तर विकासको काममा ध्यान नदिएको गुनासो पोख्दै युवाहरुले भने, "दुर्गा प्रसाईंले बोल्ने मात्र होईन पूर्वमा काम गरेर समेत देखाउनु भयो । हामीलाई पनि अब बोल्ने भन्दा काम गर्ने व्यक्ति चाहिएकोले दुर्गा प्रसाईंलाई निम्तो दिएर बोलाएका हौँ । वहाँले यो ठाउँमा पनि लगानी गरिदिएमा हामी सक्दो साथ सहयोग दिन तयार छौं ।"
दुर्गा प्रसाईंलाई धनगढीमा बाईक र्याली गरेर भव्य स्वागत गरिएको थियो भने सुर्खेतमा लाखे नांच सहित स्वागत गरिएको थियो । दुर्गा प्रसाईंमाथिको आशालाई निराश नबनाउने वाचा समेत दुर्गा प्रसाईंले व्यक्त गरेका छन् ।
सुर्खेत पुगेका दुर्गा प्रसाईंले भने, "बीएण्डसी अस्पताल र पुर्वान्चल क्यान्सर अस्पतालमा पश्चिम र सुदूरपश्चिम बाट आएको बिरामीलाई २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्छु । हामीले दिएको २० प्रतिशतले तपाईहरुलाई आएर खाना खानेदेखि बस्ने खर्च पुग्छ ।"
प्रसाईंले सरकारलाई समेत मेडिकल छेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । निजी छेत्रको लगानीले गर्दा नेपाली उपचार गर्न विदेश जानुपर्दैन साथै विधार्थीहरु पनि मेडिकल पढ्न विदेश जानुनपर्ने अवस्था बन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
आश्विन १५, २०७८ शुक्रवार १३:५७:११ बजे : प्रकाशित